पाँचथर जोड्ने काबेली नदीको पुल जोखिममा
ताप्लेजुङ, २० वैशाख । ताप्लेजुङ र पाँचथरलाई जोड्ने काबेली नदी माथिको मोटरेबल पुल जोखिममा परेको छ । निर्माणाधीन काबेली ‘बी’ जलविद्युत् आयोजनाले पुलको बेवास्ता गर्दै पूर्वाधारको निर्माण गरेकाले ताप्लेजुङको पाथीभरा…
तीनहजारलाई पुनः कोरिया लगिने
काठमाडौँ, १६ वैशाख । पहिले नै दक्षीण कोरिया गएर फर्किएका तीनहजार नेपालीलाई पुनः कोरिया लगिने भएको छ । कोरियाले राम्रो काम गरेर फर्किएका तीन हजारको नाम पठाएपछि पुनः परीक्षाका आधारमा…
काठमाडौँ, २७ चैत । पाकिस्तान सरकारले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको छात्रवृत्ति ‘सिट’ दोब्बरले वृद्धि गरिएको घोषणा गरेको छ । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले हालै सम्पन्न आफ्नो औपचारिक नेपाल भ्रमणका क्रममा गर्नुभएको उक्त…
फलेवास, पर्वत, ५ चैत । विगत साढे दुई दशकदेखि बन्द अवस्थामा रहेको बलेवा विमानस्थलमा आज पहिलो पटक परीक्षण उडान गरियो । यही चैत ९ गतेदेखि नियमित सञ्चालनमा आउने तयारीमा रहेको…
पोखरा, ५ चैत । सामाजिक सञ्जाल, भाइबर, इमो र म्यासेन्जरबाट चिट्ठा परेको भन्दै पैसा ठगी गरेको अभियोगमा प्रहरीले विभिन्न स्थानबाट नौ जनालाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीद्वारा…
भक्तपुर, १ चैत । एघार वर्षीय सुनिल कुँवर इँट्टा बनाउने साँचो निकै छिटो चलाउँछन् । हातमा कापी कलम समाएर पढ्ने, लेख्ने उमेरको हात भक्तपुरको झौखेलस्थित एक इँट्टा भट्टामा परिवारसँगै इँट्टा…
धुलिखेल, ११ फागुन । बनेपा नगरपालिकाले नगरलाई व्यवस्थित बनाउने अभियान स्वरुप बिहीबार मुख्य बजारको पुल बजारदेखि बुडोलडाँडासम्मको अरनिको राजमार्ग दायाँबायाँका सबै सामग्री हटाएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख लक्ष्मीनरसिंह बादेको नेतृत्वमा…
पाँचथर, ७ फागुन । पाँचथर र ताप्लेजुङको सिमानामा पर्ने तिम्बुपोखरी पर्यटकीय स्थलको रुपमा परिचित छ । यस पोखरीमा पछिल्लो समय घुम्न जाने पर्यटकको संख्यामा समेत वृद्धि हुन थालेको छ ।…
गाउँका ८० प्रतिशत युवा वैदेशिक रोजगारीमा
सिमरा, बारा, ३ फागुन । मुलुकमा बढ्दो बेरोजगारीको कारण बाराको सिंगो गाउँको ८० प्रतिशत युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–२४ हरपुर गाउँका ८० प्रतिशत युवा वैदेशिक रोजगारीमा…
वृद्धाभत्ता बढाउनुपर्ने माग
काठमाडौँ, २९ माघ । ज्येष्ठ नागरिकले वृद्धाभत्ता बढाउनुपर्नेमा जोड दिंदै आएका छन् । अहिले पाउँदै आएको रु दुई हजार भत्ता पुनरावलोन गरी महँगी र समयअनुसार बढाउनुपर्ने माग गर्दै ज्येष्ठ नागरिकले…
सांसद र जग्गा व्यवसायीसँग फिरौती माग्ने पक्राउ
पोखरा, १८ माघ । संगठित रुपमा सांसद तथा विभिन्न व्यवसायीसँग करोडाँै रकम फिरौती माग गर्ने चार जनालाई कास्की प्रहरीले आज पक्राउ गरेको छ । उक्त समूहले प्रदेश नं ४ कास्कीका…
बुधबार १५२ वर्षपछिको खगोलीय घटना
काठमाडौँ, १६ माघ । माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन बुधबार बेलुकी खग्रास चन्द्रग्रहण लाग्ने भएको छ । यही माघ १७ गते बेलुकी ५ बजेर ५५ मिनेटमा चन्द्रमा उदाउने र बेलुकी ६…
काठमाडौँ, १५ माघ । नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले काठमाडौँ उपत्यकाका पाँच अस्पतालबाट १७ चिकित्सक तथा सञ्चालकलाई आज पक्राउ गरेको छ । पक्राउ परेकामा एपोलो अस्पताल, चाइना गेटवाल, चाइना पिपुल, निजामती…
चितवन, २६ साउन । सरकारले शुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा जिल्लामा उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छ । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिमार्फत असार १ गतेबाट जिल्लामा स्वास्थ्यबीमा कार्यक्रम शुरु गरिएको थियो…
काठमाडौँ, ३ साउन । गत वैशाखमा कास्की माछापुच्छे« गाउँपालिका घर भई पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिका बस्ने २२ वर्षीय प्रताप मल्ल प्रहरी हिरासतमा पुग्यो । कारण थियो मल्लले आफ्नो फेसबुकमा राष्ट्रपतिको तस्वीर जोडेर…
काठमाडौँ, ३१ असार । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको अध्यक्षमा रोहन गुरुङ विजयी हुनुभएको छ । गुरुङले ४३४ मत प्राप्त गर्नुभएको हो भने उहाँका निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी विमल ढकालले ३४१ मात्र…
नेपाल रेडक्रसलाई एम्बुलेन्स
काठमाडौँ, २१ असार । जापानी दूतावासले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई चार जिल्लामा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवालाई सुधार गर्न चार एम्बुलेन्स प्रदान गरेको छ । ती जिल्लामा जाजरकोट, खोटाङ, धनकुटा र रौतहट छन्…
कृषि पर्यटनको विकास र संस्कृतिको जगेर्नाका लागि रोपाइँ महोत्सव
पोखरा, १५ असार । कृषि पर्यटनको विकास र संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले पर्यटकीय नगरी पोखरामा आज रोपाइँ महोत्सव गरिएको छ । पोखरा पर्यटन परिषद्द्वारा विगत १३ वर्षयता सञ्चालन गर्दै आएकोे…
बनेपा, ११ असार । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा हाते ट्याक्टर उपलब्ध गराइएको छ । पहाडी भेगमा समेत धानखेतीका लागि समेत उपयोगी मानिने हाते ट्याक्टर जिल्लाको मण्डनदेउपुर, पाँचखाल, बेथानचोक,…
मलेसिया जाने कामदार सबैभन्दा समस्यामा
काठमाडौँ, ९ असार । मलेसिया जाने कामदार सबैभन्दा बढी ठगी र समस्यामा पर्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । मानवअधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम)ले आज यहाँ सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा…
गाईघाट (उदयपुर), ७ असार । केही दिनअघि उदयपुर जिल्लाका करिब १७ जना युवा एक म्यान पावरबाट वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा साउदी अरब पुरयाउने नाममा ठगीमा परेर अहिले साउदी अरबमा बेपत्ता भएका…
महिना दिनको भेटी रु नौ लाख
बागलुङ, २ असार । बागलुङस्थित प्रसिद्ध कालिका भगवती मन्दिरमा गएको जेठ महिनामा रु नौ लाख ३५ हजार ३३० भेटी सङ्कलन भएको छ । नगद, बोका, राँगो, कुखुराको मुढ (टाउको), चामल,…
चितवन, १ असार । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाअन्तर्गतको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आजबाट सुरु भएको छ । भरतपुर अस्पताल परिसरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सदस्यता दर्ता शुभारम्भ गरिएको हो । कार्यक्रमअन्तर्गत पाँचजनाको…
कक्षाकोठाको अभावमा विद्यार्थी त्रिपालमुनि बसेर पढ्न बाध्य
बेनी (म्याग्दी), १ असार । प्रचण्ड गर्मी अनि असार महिनाको सुरुवातसँगै प्रि मनसुनको पूर्व समय । दिनहुँ चर्को घाम लाग्ने, हावाहुरी चल्ने र एकैछिनमा गड्याङगुडुङसहित ठूलो पानी पर्ने । घाम…
चितवन, २९ जेठ । राम्रो वन क्षेत्रका रुपमा परिचित चितवनमा यस वर्ष सरकारी तवरबाट मात्रै ११ लाख ४५ हजार बिरुवा रोपिने भएको छ । जिल्ला वन कार्यालयले व्यवस्थापन गरेको नर्सरीमा…
अबुधाबी (दुबई), २६ जेठ । आम्दानीका लागि देशमा अवसर र सम्भावना नदेखेपछि बिदेसिने महिला तथा पुरुषको सङ्ख्या बढ्दो छ । घरको आर्थिक जिम्मेवारी पुरुषले मात्र सम्हाल्नुपर्ने सोचमा परिवर्तन हुनथालेसँगै रोजगारीका…
बैतडी, २५ जेठ । विश्व बैंकको करिब रु २० करोड सहयोगमा सुरु भएको सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला बैतडी, दार्चुला र बझाङका मुख्य राजमार्गमा स्टिलबार ९स्टिल क्रस बेरियर० लगाउने कार्य अन्तिम चरणमा…
मोहोरमा किनेको बस्तीमा आर्थिक विकासका लागि घरवास कार्यक्रम
पोखरा, २१ जेठ । झट्ट सुन्दा अचम्म लाग्नसक्छ, कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका– ८ स्थित मोहोरिया १७ औँं शताब्दीतिर एक मोहोर (५० पैसा) मा किनेर बसाइएको बस्ती हो । मोहोरमा किनिएको बस्ती…
काँकडभिट्टा (झापा), २६ वैशाख । दुवै मिर्गौला खराब भएर विगत एक वर्षदेखि डायलासिस गरिरहेका पतिको उपचार खर्च जुटाउन अर्जुनधारा–७ की २६ वर्षीया शान्ता राईले टेम्पो चलाउन थाल्नुभएकोे छ । शान्ताका…
गुलरिया (बर्दिया), २४ चैत । बर्दियाको राजापुरस्थित कर्णाली नदीमा नुहाउने क्रममा एक १६ वर्षीय बालक बेपत्ता भएका छन् । बर्दियाको राजापुर र कैलालीको सत्तीघाटलाई जोड्ने कर्णाली पुलमा नुहाउँदै गरेको फोटो…
घरेलु काममा बालश्रमिकको प्रयोग बढी
रत्ननगर (चितवन), २२ चैत । चितवनको रत्ननगर क्षेत्रमा अझै ४२९ जना बालश्रमिक भेटिएका छन् । सन् २०१७ भित्र रत्ननगर नगरपालिकालाई बालश्रममुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्यसहित यहाँ गरिएको सर्वेक्षणमा यस्तो पाइएको रत्ननगर…
घरघरमै धारा जोडिएपछि पातलखर्कवासी हर्षित
फलेवास (पर्वत), २० चैत । जङ्गलको छेउछाउमा रहेको एउटा मगरसमुदायको बस्ती । जहाँ न स्वच्छ खानेपानीको उचित प्रबन्ध न त अन्य सुविधा नै । जिल्लाबाट गाउँसम्म पुगेका विभिन्न सङ्घ संस्था…
काठमाडौँ, १८ चैत । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा मिर्गौला प्रत्यारोपण सुरु भएको करिब नौ वर्षपछि नेपालमै पहिलोपल्ट ‘एबिओ इन्कम्प्याटिबल’ तथा फरक रक्त समूहको मिर्गाैलाको सफल प्रत्यारोपण गरिएको छ ।…
बीस वर्षपछि हाइड्रोसिलको शल्यक्रिया
गौर (रौतहट), १३ चैत । “पैसा भएको भए त मैले २२ वर्षअघि नै उपचार गरिहाल्थेँ नि ?” वसन्तीपुर–८ का ७५ वर्षीय हिपाराउत कुर्मीले आँसु झार्दै भन्नुभयो, “दश वर्षअघि बुढी बितेपछि…
काठमाडौँ, ९ चैत । ग्रामीण स्वास्थ्यको समग्र गुणस्तर तथा पूर्वाधार विकासमा उत्कृष्ट योगदान दिएबापत सन् २०१६ को निक साइमन्स पुरस्कार प्युठान जिल्ला, बरौला स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत जनस्वास्थ्य निरीक्षक बालगोपाल श्रेष्ठले…
छेरवाङ, सिद्धि (चितवन), २९ फागुन । पखेरामा बनेको सानो झुप्रोको माइती घर । अगेना छेउमा मैलो चोलो र फरियामा डङ्रङ्ग सुतेकी छिन् ताराकुमारी चेपाङ । झिङ्गा भन्किरहेको छ । झिङ्गा…
हिमपात सुरु –यार्सागुम्बाको गुणस्तरमा वृद्धि
दुनै (डोल्पा), २७ फागुन । डोल्पामा आज बिहानैदेखि हिमपात सुरु भएको छ । गत बुधबारदेखिको लगातार वर्षापछि जिल्लाभर हिमपात सुरु भएको हो । वर्षासँगैको भारी हिमपातले बढेको अत्यधिक चिसोका कारण…
नौसय विद्यार्थीलाई रु १० लाखको छात्रवृत्ति
भक्तपुर, २७ फागुन । जेहेन्दार तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विभिन्न बिद्यालयका १ देखि १२ कक्षासम्म अध्ययनरत नौसय विद्यार्थीलाई बिहीबार जनक खड्का छात्रवृत्ति कोषले रु १० लाख बराबरको छात्रवृत्ति प्रदान…
गुणस्तरहीन खानेकुराका कारण विश्वमा बर्सेनि चार लाखको मृत्यु
काठमाडौँ, २६ फागुन । प्रदूषित खानेकुराका कारण विश्वमा बर्सेनि चार लाख मानिसको ज्यान जाने गरेको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आयोजना गरेको ‘नवौँ खाद्य स्वच्छता दिवस–२०७३’का अवसरमा…
मोटर पुग्दा अबीरजात्रा गरेर खुसियाली
धुलिखेल, २४ फागुन । गाउँमा पहिलो पटक यात्रुबाहक गाडी पुग्दा स्थानीयवासीले खुुसी साटासाट गरी रमाइलो मनाएका छन् । जिल्ला सदरमुकामबाट १६ किलोमिटर मात्रै टाढाको दूरीमा रहेको बल्थली गाविस र महाँकालचौर…
नौंचुबाट ४०० वर्ष अघिको इतिहास खोतल्दै पौंगीलम गुरुङ
पोखरा, २१ फागुन । कास्कीको पर्यटकीय ताङतिङ गाउँको सिरानमा रहेको गुरुङहरूको अती प्राचीन बस्ती नौंचुबाट ४०० वर्ष अघिदेखिको इतिहास खोतल्ने प्रयास गरिएको छ । गुरुङ जातभित्रका विभिन्न समुदायमध्येको एक पौंगीलम…
बैंकर अनिल शाहका तस्बिर सार्वजनिक
काठमाडौँ, २० फागुन । मेघा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले खिच्नुभएको देशका धार्मिक र पुरातात्विक सम्पदा, हिमाल र जनावरको तस्बिर सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहले यहाँ…
गोरखा, २० फागुन । अहोरात्र स्वास्थ्य सेवामा खटिरहेका गोरखाका विभिन्न गाउँका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई मोबाइल सेट उपहार दिइएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय गोरखाले नेपाल प्रजनन स्वास्थ्य सेवा केन्द्र (एनएफसिसी)…
सामुदायिक वनका सात सय असी उपभोक्तालाई सौर्यबत्ती
सुरुङ्गा (झापा), १९ फागुन । झापाको कनकाई नगरपालिकामा रहेको एक सामुदायिक वनले आफ्ना सबै उपभोक्तालाई सौर्य वत्ती वितरण गरेको छ । अनियमित रुपमा हुने विद्युत्भार कटौतीका कारण अन्धकारमा बस्नु परेको…
शान्ति बाल उद्यान निर्माण
धनगढी, १३ फागुन । धनगढी उपमहानगरको हसनपुरमा करिब तीन दशक अघि निर्माण भई प्रयोगबिहीन र जीर्ण अवस्थामा रहेको बाल उद्यानलाई ‘शान्ति बाल उद्यान‘का रुपमा विकास गरिएको छ । यस क्रममा…
रत्ननगर (चितवन), ९ फागुन । अनुमति बिना कक्षा सञ्चालन गर्ने जिल्लाका १९ निजी विद्यालयलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय चितवनले कारबाही गरेको छ । शिक्षा नियमावलीअनुसार कारबाही गरेर त्यहाँ अध्ययनरत् विद्यार्थीले कुन…
झलारीमा एफएम रेडियो सञ्चालन
कञ्चनपुर, ८ फागुन । कञ्चनपुरको झलारी पिपलाडी नगरपालिका–१० मा झलारी मिडिया प्रालिले झलारी एफएम १०५ दशमलव ९ मेगाहर्ज सञ्चालनमा ल्याएको छ । सञ्चालनमा आएको ५०० वाट क्षमताको सो एफएमबाट कञ्चनपुर…
रामपुर (पाल्पा), ५ फागुन । सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ, नगरपालिका भित्रै खानेपानीको हाहाकारले स्थानीयवासीले गाउँ छोड्नु परेको खबरले । तर यो ज्वलन्त र यथार्थ उदाहरण हो, रामपुर नगरपालिका–१० को बालेपधेँरा,…
काठमाडौँ, १ पुस । इजराएड र कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, रामपुरबीच स्थानीय जातका मौरीहरुको अनुसन्धान र प्रवर्द्धन गर्न दुइपक्षीय सम्झौता भएको छ । शुक्रबार इजराएडको कार्यालय वालुवाटारमा इजराएडका प्रमुख बेन…
सार्वजनिक यातायातबाट थुक्नेलाई रु ५०० जरिवाना हुने
काठमाडौँ, ३० मङ्सिर । सार्वजनिक यातायातबाट सार्वजनिक स्थल र सडकमा पुस १ गतेदेखि फोहर फ्याँक्न निषेध गरिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय…
काठमाडौँ, ३० मङ्सिर । पित्त–पत्थरको उपचार आयुर्वेदीय पद्धतिबाट कम पीडा र सर्वसुलभ रुपमा हुने देखिएको छ । पित्त–पत्थरको आधुनिक चिकित्सा पद्धतिबाट उपचार गर्दा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ जुन पीडादायी र खर्चिलो…
काठमाडौँ, २८ मङ्सिर । आब २०७२/७३ को दोस्रो तथा आव २०७३/७४ को पहिलो सत्रमा व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र, भैँसेपाटी तथा महिला जागरण समाज नेपाल, टोखाको संयुक्त तत्वावधानमा आयोजित…
महेन्द्रनगर (धनुषा), १९ मङ्सिर । ‘खूव खाउ यौ दुलहा.... खूव मोटाउ यौ दुलहा ... अप्पन चोकटल चोकटल गालके फुलाउ यौ दुलहा...’ (अर्थात् राम्ररी खानू अनि मोटाउनू) यस्तै सुमधुर लोकगीत सङ्गीतबीच…
काठमाडौं, १७ मङ्सिर । प्रेस काउन्सिल नेपालको आयोजनामा आज राजधानीमा चिनियाँ प्रतिनिधि मण्डलको स्वागत तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो । कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बोर्णवहादुर कार्कीले नेपाल भ्रमणमा रहेको…
हिमालयन बैंक र अमेरिकन एक्सप्रेससँगको सहकार्यमा पर्यटन बोर्डले ग्लोबल क्याम्पेनिङ सुरु गर्ने
काठमाडौँ, १६ मङ्सिर । नेपालमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डले हिमालयन बैंक र अमेरिकन एक्सप्रेससँगको सहकार्यमा ग्लोबल क्याम्पेनिङ सुरु गर्ने भएको छ । ‘एक्सपेरियन्स नेपाल’ भन्ने नारासहित बोर्डले विश्वका…
महेन्द्रनगर (धनुषा), १४ मङ्सिर । प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुरधाममा आजदेखि विवाह पञ्चमी महोत्सव सुरु भएको छ । त्रेतायुगमा .श्रीराम र सीताबीच भएको विवाहको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष मङ्सिर शुक्ल पञ्चमीका दिन…
३७ वटा मिनी टिलर वितरण
बाबियाचौर (म्याग्दी), १३ मङ्सिर । कृषि विकास कार्यालयले यस वर्ष म्याग्दीका कृषकलाई ३७ वटा खेतबारी जोत्ने आधुनिक उपकरण (मिनी टिलर) वितरण गरेको छ । यान्त्रीकीकरणमार्फत कृषि पेशालाई सहज बनाउने, लागत…
पाल्पा, १३ मङ्सिर । पाल्पाका ग्रामीण भेगका विद्यार्थीलाई दुई तीन घन्टा पैदल हिँडेर पढ्न जानुपर्ने समस्या रहेको छ । मुझुङ्ग गाविसभित्र छात्रछात्रा उमावि पढ्न अन्यत्र गाविसको विद्यालय धाउँदै आएका छन्…
कास्की, १२ मङ्सिर । प्राकृतिक विपद् र मानवीय क्रियाकलापका कारण पुरिँदै गएको पोखराको फेवातालको संरक्षण गर्न पछिल्लो समयमा सुरु गरिएको ‘वातावरणीय सेवा भुक्तानी’ (पिइएस) कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।…
लुम्बिनी, ८ मङ्सिर । विश्व शान्तिको उद्गमस्थल लुम्बिनीमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो थान्का प्रदर्शनी हुने भएको छ । नेपाल र जापानबीच कुटनीतिक सम्बन्धको ६० वर्ष पूरा भएको अवसरमा रुपन्देहीस्थित नेपाल बौद्ध…
नौमती–पञ्चेबाजा महोत्सव सुरु
काठमाडौँ, १ मङ्सिर । दोस्रो राष्ट्रिय नौमती–पञ्चेबाजा महोत्सव आजदेखि राष्ट्रिय नाचघर जमलमा सुरु भएको छ । यहाँ आज आयोजित कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले नगरा बजाएर महोत्सवको उद्घाटन गर्नुभयो । नेपाल…
गुरुङ संस्कृतिको जीवन्त नमुना बनेको छ पर्यटकीय गाउँ सिक्लेस
पोखरा, २४ कात्तिक । कला, संस्कृति र अनुपम प्रकृतिका कारण स्वदेशी एवम् विदेशी पर्यटकको आकर्षण बन्दै गएको छ कास्कीको पर्यटकीय गाउँ सिक्लेस । गुरुङ कला संस्कृतिको जीवन्त अनुभव गर्न पाइने…
पथरी (मोरङ), २३ कात्तिक । दृष्टिविहीन रहनुभएका मोरङको उर्लाबारीका बालकुमार तामाङलाई कम्प्युटर चलाउन सक्छु भन्ने विश्वास थिएन । उहाँ आफैँले केही वर्षअघि कम्प्युटर सिक्ने इच्छा त राख्नुभयो, तर दृष्टिविहीनलाई सिकाउने…
दसैँतिहारपछि सुदूर पहाडमा जात्राको रौनक
बैतडी, २३ कात्तिक । हिन्दू नेपालीको महान् चाड दसैँ तथा तिहार सकिएलगत्तै सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा भने विभिन्न मन्दिरमा जात्रा तथा मेलाको समय सुरु भएसँगै रौनकता छाएको छ । परम्परागतरुपमा देवीदेवताका…
काठमाडौँ, २२ कात्तिक । शरद ऋतुमा विभिन्न हिमाल आरोहणका लागि एक हजार ६९ जनाले आरोहण अनुमति लिएका छन् । यो मौसम (असोज र कात्तिक) पर्वतारोहणका लागि उपयुक्त भएकाले उल्लेख्य सङ्ख्यामा…
धनगढी, २२ कात्तिक । घुम्न जाने पर्यटकका लागि कैलालीको टीकापुरमा रहेको बृहत् उद्यान (टीकापुर पार्क) आकर्षक गन्तव्य बन्न थालेको छ । पार्क छेउमै रहेको कर्णाली नदीको कलकल बग्ने पानी, नदीको…
विद्युत् उत्पादन बन्द
नवलपरासी, १८ कात्तिक । नहरमा पानी बन्द गरिएपछि नवलपरासीमा रहेको विद्युत् उत्पादन गृहमा उत्पादन बन्द हुन पुगेको छ । भारतले यस वर्ष पनि नहर मर्मत सम्भार गर्नका लागि भनी नहरमा…
भक्तपुर, १२ कात्तिक । दोस्रो ठूलो पर्व तिहार सुरु भइसके पनि भक्तपुरका किसानलाई भने यतिखेर धान भित्र्याउन चटारो छ । तिहार आइसके पनि यहाँका किसान भने धान काट्ने, सुकाउने र…
धान काट्न छाडेर डकर्मी तालिम लिँदै धादिङवासी
फूलखर्क (धादिङ), ११ कात्तिक । कात्तिक महिना सुरु भएसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा धान काट्ने र थन्काउने माचो परेको छ तर गुम्दीका पूर्णसिंह तामाङ भने धान काट्न छाडेर तीन घन्टा टाढा डकर्मी…
लिबाङ (रोल्पा), ८ कात्तिक । गजुल–३ रोल्पाका आइतराम सुनारले २४ वर्षदेखि ढुङ्गा कुटेर जीविका चलाउँदै आउनुभएको छ । उमेरले ५७ वर्ष पार गरिसकेका सुनार प्रायः घरदेखि करिब दुई घन्टा टाढा…
बैतडी, ७ कात्तिक । पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सुदूरपश्चिमकै पहिलो प्याराग्लाइडिङ बैतडीको पाटनमा हुने भएको छ । प्याराग्लाइडिङका लागि प्राविधिक टोलीले उपयुक्त ठहर गरेपछि कात्तिकको तेस्रो सातामा मध्यपहाडी लोकमार्गको पश्चिमी…
पोखरा, ५ कात्तिक । विश्वमै पर्यटकीयरुपमा ख्याति कमाएको पर्यटकीय नगरी पोखरामा आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण बढ्दै गएको छ । गत वर्षको भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण तहसनहस बनेको पोखराको पर्यटनलाई अघिल्लो वर्ष…
विद्यालय जाने उमेरमा बदाम बेच्दै बालक
गुलरिया (बर्दिया), ४ कात्तिक । बर्दियाको सदरमुकाम गुलरियामा १० वर्षीय बालक विशाल राठौर स्कुल जान त पाएनन् नै बरु बदाम बेच्दै पेट पाल्न बाध्य छन् । मुस्लिम परिवारका राठौरका आमाबुबा…
काठमाडौं, ३ कार्तिक । शिक्षा सम्बन्धी काम गर्दै आएको घाँसी नेपालले भूकम्प प्रभावित विद्यालयहरु पुनर्निर्माण गर्ने अभियानलाई तिव्रता दिएको छ । पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्दै घाँसी नेपालले ६० वटा भूकम्प प्रभावित…
पोखरा, १ कात्तिक । पर्वतीय पर्यटनका लागि विश्वमा नै आफ्नो विशिष्ट पहिचान बनाउन सफल अन्नपूर्ण सेरोफेरो क्षेत्र पदयात्राका लागि विशिष्ट गन्तव्य बन्दै गएको छ । नेपालका विभिन्न पदमार्गमध्येमा आकर्षक एवम्…
धार्मिक र आयुर्वेदिक महत्वको रुद्राक्षको माग बढ्दो
बेनी (म्याग्दी), १ कात्तिक । हिन्दूहरुको धार्मिक आस्थाका रुपमा रहेको रुद्राक्षले अलौकिक शक्ति प्रदान गर्नुका साथै आयुर्वेदिक औषधिमा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि यसको माग बढ्दै जान थालेको…
काठमाडौँ, ८ असोज । त्रिवि, पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस बागबजारले नेपाली भाषामा अनावश्यक रुपमा उठेको विवाद र व्यक्तिविशेषका वर्णविन्याससम्बन्धी मतमतान्तरले भाषाको हित र उन्नयन हुन नसक्ने जनाएको छ । उक्त क्याम्पसका…
बेलौती बेचेर शैक्षिक सामग्री किन्छन् विद्यार्थी
लिबाङ (रोल्पा), ७ असोज । आर्थिक अभावका कारण जिल्लाका केही बालबालिकाले बिदाका दिनमा बेलौती (अम्बा) बेचेर शैक्षिक सामग्री जुटाउँदै आएका छन् । पढ्ने तीव्र चाहना हुँदाहुँदै पनि शैक्षिक सामग्रीको अभावका…
महिलाले पनि कपाल काट्न हुन्छ र, हेमन्तालाई सोध्नुहोस !
पथरी (मोरङ), २९ भदौ । कपाल काट्ने सैलुन कसले चलाउँछ वा सैलुनमा कसले कपाल काट्छ भनेर कसैलाई प्रश्न गरे सहजै उत्तर आउँछ, पुरुषले । तर त्यो प्रश्नको उत्तर अब गलत…
नगरकोटमा पर्यटक प्रहरी पोस्टको उद्घाटन
भक्तपुर, २८ भदौ । पर्यटकको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर भक्तपुरको पर्यटकीय क्षेत्र नगरकोटमा निर्माण भएको पर्यटक प्रहरी पोस्टको आज उद्घाटन गरियो । महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक प्रतापसिंह थापाले…
खादा प्रयोग बारे बौद्धमार्गीको सामूहिक धारणा अाउने
काठमाडौं, २६ भदौ । पछिल्लो समय सतहीमा देखिएको खादा अर्थात खातकको बारेमा बौद्धमार्गीहरुले सामूहिक धारणा निर्माण गर्ने भएका छन् । शेर्पा पत्रकार संघ नेपालले सबै बौद्धमार्गीलाई एकै ठाउँमा राखेर अन्तर्क्रिया…
यती डेभलपमेण्ट बैंकद्वारा तीज र ऋषी पञ्चमीमा चिसो पानी वितरण
काठमाडौं, २२ भदौ । महिलाहरुको महान चाड हरितालिका तीज र ऋषी पञ्चमीको अवसरमा यती डेभलपमेण्ट बैंकले भदौ १९ गते पशुपति क्षेत्र परिसरमा र भदौ २१ गते टेकुस्थित ऋषेश्वर महादेव दर्शन…
नेपाली क्रिकेटमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन आइसिसी सहमत
काठमाडौँ, १९ भदौ । लामो समयदेखि क्रिकेट सङ्घको विवाद समाधान गर्न नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) विघटन गरी नेपाल क्रिकेट विकास बोर्ड गठन गरिने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र…
भक्तपुर, ५ भदौ । इसापूर्व ३०० वर्ष पहिलादेखि मध्यपुर थिमिको नगदेशमा सञ्चालन भएर सात वर्षअघि बन्द भएको महाकाली नाच नगदेशमा गए रातिदेखि सुरु भएको छ । अर्थाभावका कारण प्रदर्शनमा ल्याउन…
पाल्पा, ३२ साउन । बौघागुम्बा गाविस–२, कालीगण्डकी नदीको दक्षिणको भिरालो चट्टाननिरको तीरमा अवस्थित रानीमहल बर्सेनि जोखिमको नजिक पुगेको छ । राणाकालीन समयमा पश्चिमी कलाकौशल प्रयोग गरी निर्माण गरिएको सुन्दर धरोहर…
हाँडीगाउँ–गोसाइँकुण्ड पर्यटन भ्रमण सुरु
काठमाडौँ, ३० साउन । कामपा–५ स्थित हाँडीगाउँ–गहना पोखरीलाई देशकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय सांस्कृतिक पर्व÷बाह्रमहिने पर्यटन पर्व सार्वजनिक/नेपालमण्डल हाँडीगाउँः गोसाइँकुण्ड (शिलु) भ्रमण आजदेखि सुरू गरिएको छ । मेची…
सर्लाही, १८ साउन । हरिवन नगरपालिका वडा नम्बर ८ का मोहनबहादुर कार्कीको करेसाबारीमा पसाएको सात फिट लामो केराको घरीमा ८७ वटा काइँयो फलेका छन् । सतासी काइँयोमा दुई हजारभन्दा बढी…
धुन्चे (रसुवा), १८ साउन । तामाङ सम्पदा मार्गअन्तर्गत उत्तरी क्षेत्रको गतलाङ गाउँमा नमुना पर्यटकीय मार्ग निर्माण भएको छ । निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष चेरसिङ तमाङका अनुसार गतलाङ गाउँको सामुदायिक लजदेखि…
पोखरा, १३ साउन । सात तालको बगैँचा शहर लेखनाथ नगरपालिकास्थित विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत रुपातालको रुप र सौन्दर्य जोगाउने विषयले यतिखेर सर्वत्र चर्चा पाएको छ । कास्कीको रुपाकोट, हंसपुरको सिरान…
साउन २२ मा क्रसमान्डु नेसनल च्याम्पियनसिप हुने
काठमाडौं, १३ साउन । आगामी साउन २२ गते शनिबार राजधानीको तिनकुनेमा ‘क्रसमान्डु नेसनल च्याम्पियनसिप २०१६’ हुने भएको छ । नेपाल मोटरसाइकल फेडरेसन (एनएमएफ) को आयोजनामा हुने उक्त च्याम्पियनसिपमा २५० सिसीसम्मका…
काठमाडौँ, ६ साउन । सातौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा ३२ खेल समावेश हुने भएको छ । सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद कार्यकारी समितिका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टको…
काठमाडौँ, ६ साउन । फुटबलका नवयुग श्रेष्ठ र जुडोकी फुपूल्हामु खत्री विसं २०७२ का उत्कृष्ट पुरुष र महिला खेलाडी घोषित भएका छन् । नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चद्वारा आज आयोजित ‘स्पोर्ट्स…
कतार एयरवेजसँग बार्सिलोनाको पुन: सम्झाैता
काठमाडौं, ५ असार । बार्सिलोना फुटबल टिम कतार एयरवेजसँगको करार लम्ब्याउन सहमत भएको छ । कतार एयरवेज बार्सिलोना फुटबल टिमको जर्सीको प्रायोजक हो । नयाँ करार अनुसार कम्तीमा सन् २०१७…
काठमाडौँ, ५ साउन । नेपाली राष्ट्रिय क्रिक्रेट टोलीले मैत्रीपूर्ण खेलमा इङ्ल्यान्डको मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब (एमसिसी)लाई ४१ रनले हराएको छ । नेपालले दिएको २१८ रनको लक्ष्य पछ्याएको घरेलु टोली मेरिलेबोनले ४७.२…
काठमाडौँ, ३ साउन । बेलायत भ्रमणमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले चौथो तथा अन्तिम अभ्यास खेलमा पनि जित हासिल गरेको छ । चार खेलमा शतप्रतिशत जित निकाल्ने क्रममा नेपालले गएराति…
अभ्यास खेलमा नेपालको लगातार तेस्रो जित
काठमाडौँ, १ साउन । अभ्यास खेलका लागि बेलायत भ्रमणमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले क्लब क्रिकेट कन्फ्रेन्सलाई (सिसिसी) चार विकेटले हराएको छ । बेलायतको लण्डनस्थित स्टानमोर सिसी मैदानमा गएराति भएको…
बेलायती क्लबविरुद्ध नेपालको फराकिलो जित
काठमाडौँ, ३० असार । बेलायत भ्रमणमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले स्थानीय क्लबसँग भएको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल जितेको छ । बुधबार भएको खेलमा लन्डनको क्लब फ्रि फोरेस्टरलाई १२९ रनको फराकिलो…
प्रधानमन्त्री कपको उपाधि काठमाडाैँ विश्वविद्यालयलाई
काठमाडौँ, २९ असार । काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयु) ले प्रथम प्रधानमन्त्री कप विश्वविद्यालयस्तरीय राष्ट्रिय खेलकुदको उपाधि जितेको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) द्वारा आयोजित प्रतियोगितामा केयुले चार स्वर्ण, चार रजत…
काठमाडौँ, २६ असार । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले प्रथम प्रधानमन्त्री कप विश्वविद्यालयस्तरीय राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी पूरा भएको जनाएको छ । भोलि सोमबारदेखि सुरु हुने खेलकुदको तयारी पूरा भएको राखेपअन्तर्गत खेलकुद…
काठमाडौँ, २६ असार । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका प्रमुख प्रशिक्षक जगत टमाटा र कप्तान पारस खड्काले ‘क्रिकेटको घर’ नामले परिचित इङ्ग्ल्यान्डको लन्डनस्थित ‘लड्स क्रिकेट मैदान’मा नेपालले खेल्न पाउनु ठूलो सौभाग्य…
फुटबल स्टार मेसीलाई २१ महिनाको जेल सजाय
बार्सिलोना, (स्पेन), २२ असार । बार्सिलोनाको एक अदालतले विश्व फुटबल स्टार लियोनल मेसी र उनका पिता जर्ज होरासियो मेसीलाई आफ्नो कमाई अनुसार तिनुपर्ने कर नतिरेको अभियोगमा २१ महिनाको जेल सजाय…
नेपाल बङ्गलादेशबीच मैत्रीपूर्ण खेल हुने
काठमाडौँ, २२ असार । नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली र बङ्गलादेशको राष्ट्रिय टोलीबीच दुई अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल हुने भएको छ । खेल आगामी असार ३१ र साउन २ गते बङ्गलादेशमा तय…
काठमाडौँ, २० असार । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी) अन्तर्गतको छनोट समितिले युके (संयुक्त अधिराज्य)को तयारी भ्रमणमा निस्कने नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा गरेको छ । आज घोषणा गरिएको १५ सदस्यीय…
क्यान निलम्बन अनुमोदन
काठमाडौँ, १७ असार । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी)को साधारणसभाले नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान)लाई निलम्बन गर्ने निर्णय अनुमोदन गरेको छ । स्कटल्यान्डमा बिहीबार बसेको आइसिसीको पूर्ण बैठक (साधारणसभा)ले नेपालबारे यसअघि भएको…
नवयुग र सन्दीप ‘पिपुल च्वाइस अवार्ड’को मनोनयनमा
काठमाडौँ, १७ असार । फुटबल खेलाडी नवयुग श्रेष्ठ र युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने ‘पल्सर स्पोर्टस अवार्ड’अन्तर्गत ‘पिपुल च्वाइस अवार्ड’ को मनोनयनमा परेका छन् । ‘पिपुल च्वाइस अवार्ड’को मनोनयन आज सार्वजनिक…
बराह क्षेत्रमा रु एक करोड लगानी
पोखरा, १० असार । लेखनाथ नगरपालिकाको बेगनास ताल पारीको बराह क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न रु एक करोड पाँच लाखको लगानीमा विभिन्न भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ ।…
‘पर्यटनको नयाँ प्रोडक्ट’ मिस टुरिज्म
काठमाडौँ, ४ असार । नेपालमा पहिलोपटक आयोजना हुन गइरहेको मिस टुरिज्मलाई पर्यटनको नयाँ प्रोडक्टका रुपमा विकास गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ‘मिस टुरिज्म–२०१६’ को तयारीबारे आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा…
सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि विशेष योजना ल्याउने
काठमाडौँ, २ असार । सन् २०१७ लाई घुमफिर वर्षका रुपमा मनाउने योजना गरेको सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि विशेष योजना ल्याउने भएको छ । ग्रामीण पर्यटनको दरिलो आधार मानिने घरबास…
काठमाडौँ, ३१ जेठ । सरकारले मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका चिडियाखाना व्यवस्थापन र नियमन गर्न राष्ट्रिय प्राणी उद्यान प्राधिकरण बनाउने भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को वातावरण समितिमा चिडियाखानाको नीति, योजना र भावी कार्यक्रमका…
डोल्पालीको गुनासो: बजेटले पर्यटन क्षेत्रलाई समेटेन
दुनै (डोल्पा), ३१ जेठ । सरकारले गत जेठ १५ गते आगामी आव २०७३/७४ का लागि सार्वजानिक गरेको बजेटले डोल्पाको पर्यटन क्षेत्रलाई नसमेटेको डोल्पालीले गुनासो गरेका छन् । जिल्लामा रहेका नेपालकै…
झोङ गुफा: पर्यटकको आकर्षण केन्द्र बन्दै
मुस्ताङ, ३१ जेठ । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङको उपल्लो भागमा रहेको झोङ गुफामा पाँच तला र १४४ कोठा छन् । उपल्लो मुस्ताङको लोमन्थाङबाट चीन र नेपालबीचको नाका…
काठमाडौँ ३० जेठ । साइबर अपराध गर्नेको सङ्ख्या गत वर्षको तुलनामा चालु आव सकिन एक महिना बाँकीमै दोब्बर बढेको छ । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका अनुसार आव २०७१/०७२ का तुलनामा…
शैक्षिक मेला ५२ हजार दर्शकद्वारा अवलोकन
काठमाडौँ, २९ जेठ । नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ ९इक्यान०को १०औँ शैक्षिक मेलाको दोस्रो दिन शनिबार करिब ५२ हजार जनाले अवलोकन गरेको आयोजकले जनाएको छ । यहाँ आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा…
वासिङ्टन डिसी, २९ जेठ । विश्व प्रसिद्ध फोर्व्स पत्रिकाले नेपालको पोखरालाई सबैभन्दा सस्तो पर्यटकीय गन्तव्य भएको उल्लेख गरेको छ । फोर्व्सका अनुसार अमेरिकी डलरको स्थानीय मुद्रासँगको विनिमय दरलाई आधार मानेर…
धौलागिरि पर्यटन पदमार्ग निर्माण
म्याग्दी, २८ जेठ । मुदी गाविसमा धौलागिरि हिमालको आधार शिविर जाने पदमार्ग निर्माण गरिएको छ । जिल्ला विकास समितिले रु २५ लाख उपलब्ध गराएपछि स्थानीयवासीले उपभोक्ता समितिमार्फत पदमार्ग निर्माण गरेका…
सोलुखुम्बु, २६ जेठ । पर्यटकीय क्षेत्र चौरीखर्कको घाटमा निर्माण भएको रु एक करोड ७७ लाखको झोलुङ्गे पुल स्थानीयवासीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । ब्रिटिस गोर्खा वेल्फेर, कादुरी एग्रीकल्चरल एन्ड एसोसियसन, ब्रिटिस…
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पर्यटन सुन्दरी प्रतियोगिता
काठमाडौँ, २४ जेठ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने मुख्य उद्देश्यले पहिलो पटक ‘मिस टुरिज्म–२०१६’ को आयोजना गरिने भएको छ । प्वाइन्ट मिडिया प्रालिले आगामी भदौ २५ गते…
बक्सिङका विश्व च्याम्पियन मोहम्मद अलिको निधन
लस एन्जेलस (संयुक्त राज्य अमेरिका), २२ जेठ । बक्सिङ खेलका विश्व च्याम्पियन अमेरिकी खेलाडी मोहम्मद अलिको ७४ वर्षको उमेरमा शुक्रबार निधन भएको समाचार छ । उहाँका पारिवारिक प्रवक्ताले अलिको शुक्रबार…
काठमाडौँ, २० जेठ । विश्व फुटबल महासङ्घ (फिफा)ले आज सार्वजनिक गरेको बरियतामा नेपाल दुई स्थान तल झर्दै १८२ औं स्थानमा पुगेको छ । फिफा बरियतामा दुई स्थान तल झरेपछि दक्षिण…
‘प्रत्येक प्रदेशमा सुविधासम्पन्न रङ्गशाला’
कतार, २० जेठ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री सत्यनारायण मण्डलले सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा सुविधासम्पन्न रङ्गशाला र क्रिकेट मैदान निर्माण गर्ने बताउनुभएको छ । कतारस्थित नेपाली दूतावासमा नेपाली समुदायसँग बुधबार भएको भेटमा…
बागलुङ, १३ जेठ । बागलुङ बजारवासीलाई लक्षित गरी यातायात व्यवसायीहरुले विद्युतीय रिक्सा सञ्चालनमा ल्याएका छन् । दैनिक पाँचवटा रिक्साले सर्वसाधारण यात्रुलाई सेवा दिइरहेका छन् । बागलुङ कालिका भगवती यातायात प्रालिको…
Rato Machhendranath Chariot Festival
LALITPUR, May 18, 2016 (Xinhua) -- Devotees pull chariot of Rato Machhendranath during the month-long Rato Machhendranath Chariot Festival at Lagankhel in Lalitpur, Nepal, May 17, 2016. Rato Machhendranath is…
अमेरिका जान पर्यटक र विद्यार्थीलाई सहज हुने
अमेरिका जाने पर्यटक र अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई सहज हुने भएको छ । अमेरिकाले यही जेठ १९ गतेबाट लागू हुने गरी विद्यार्थी तथा पर्यटक भिसाको लागि आवेदन दिन बैंक मौज्दात…
काठमाडौँ, ३१ वैशाख । चौध नेपालीसहित २७ जना आरोहीले आज सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका छन् । मध्याह्नसम्म १४ विदेशी र १३ नेपालीले सगरमाथा आरोहण गरेको आधार शिविरमा रहनुभएका पर्यटन विभाग,…
काठमाडौँ, २८ वैशाख । सोतोकान कराँते ‘डो’ सङ्घ नेपाल भक्तपुरको आयोजनामा आगामी जेठ १ गते दोस्रो अनन्तलिङ्गेश्वर राष्ट्रिय सोतोकान कराँते प्रतियोगिता हुने भएको छ । सङ्घद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्तिमा…
बाजुरा, २८ वैशाख । बाजुरा जिल्लाको आटीचौर गाविस–८ नाइना गाउँकी ३० वर्षीया दीर्घा चदारा रक्तश्रावले कामजोर भए पछि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराका स्वास्थ्यकर्मी र स्थानीयले रगत दिएर नयाँ जीवन दिएका…
काठमाडौँ, २८ वैशाख । जुनियर लनटेनिस खेलाडीका अभिभावकको आयोजनामा तेस्रो नेपाल जुनियर खुला टेनिस प्रतियोगिता आगामी जेठ ४ गतेदेखि राजधानीमा सञ्चालन हुने भएको छ । प्रतियोगितामा जम्मा १४ स्वर्णपदकका लागि…
FC Barcelona won 5-0
BARCELONA, May 9, 2016 (Xinhua) -- FC Barcelona's Uruguayan forward Luis Suarez celebrates after scoring during the Spanish LIGA match between FC Barcelona and Espanyol at the Camp Nou stadium…
Djokovic won Madrid Open tennis
Novak Djokovic, left, from Serbia, and Andy Murray, from Britain, pose with their trophies at the end of their Madrid Open tennis tournament final match in Madrid, Spain, Sunday, May…
आज मातातीर्थ औंसी अर्थात् आमाको मुख हेरिँदै
आज मातातीर्थ औंसी अर्थात् आमाको मुख हेर्ने दिन । वैशाख कृष्ण औंसीका दिन हिन्दू धर्मावलम्बीले आमाको मुख हेर्ने दिनका रुपमा मनाउने गर्दछन् । आमाप्रति श्रद्धाभक्ति, आदर र सम्मान गरी मातातीर्थ…
काठमाडौँ, ६ वैशाख । नेपालले विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपअन्तर्गत नामिवियालाई आज तीन विकेटले पराजित गरेको छ । जितसँगै नेपालले विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसीपको शीर्ष चारमा पर्ने आशा जीवितै राखेको छ…
निजी स्कुल पनि मर्जरमा, प्याब्सनका अध्यक्षकै स्कुल मर्ज भयो
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीच मर्जरको प्रक्रिया चलिरहेका बेला मर्जर अब निजी शिक्षण संस्थामा पनि भित्रिएको छ । निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुको संगठन (प्याब्सन)का अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले निजी शिक्षण संस्थामा मर्जर…
झपट पुरस्कार दीक्षितलाई
काठमाडौँ, २२ चैत । यस वर्षको झपट साहित्यिक पुरस्कार वैदिक साहित्यका प्रखर विद्वान् साहित्यकार मदनमणि दीक्षितलाई प्रदान गरिएको छ । साहित्यकार झपटबहादुर राणाको १२०औँ जन्मजयन्तीका उपलक्ष्यमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा…
चितवनको विकट सिद्धि गाविसका एकजना चेपाङ आफ्नो परम्परागत पेसा डोको बुन्दै । उनीहरुले डोका बेचेर आफ्नो दैनिकी चलाउँछन् । तस्बिरः नारायण ढुंगाना, रत्ननगर, चितवन, रासस
प्रत्येक १२ वर्षमा देखाउने देवी नाच कीर्तिपुरमा देखाउँदै । तस्बिरः रामलाल श्रेष्ठ, रासस
परिक्षा दिंदै बुवा छोरी
कञ्चनपुरको राष्ट्रिय उच्च माध्यमिक विद्यालयमा रहेको परिक्षा केन्द्रमा १७ बर्षिय छोरी उर्मिला राना संगै चालिस बर्षिय बुवा गंगाराम राना प्रवेशिका परिक्षा दिंदै । दुवै शिवशक्ति माध्यमिक विद्यालय कलागौंडीका विद्यार्थि हुन्…
झापाको टाङटिङ खोलामा अपूर्ण पुल
झापाको विर्तामोड हुँदै शनिश्चरे, खुदुनावारी र इलामको दानावारी तथा शान्तिपुर जाने सडकमा खुदुनावारी–५ स्थित टाङटिङ खोलामा अपूर्ण पक्की पुललाई स्थानीयवासीले बाँसको सहायताले जोड्ने प्रयास गरेतापनि वर्षातमा कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य…
ट्वेन्टी–२० विश्वकपमा दक्षिण अफ्रिकाबाट श्रीलंका पराजित
काठमाडौं, १६ चैत । भारतमा जारी विश्वकप ट्वेन्टी ट्वेन्टी क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत गएराति भएको खेलमा दक्षिण अफ्रिकाले श्रीलंकालाई ८ विकेटले हराएको छ । दिल्लीमा भएको खेलमा पहिले व्याटिङ गरेको श्रीलंकाले…
वीर अस्पतालमा एमआरआइ सुरु मुलुकको १ सय २७ वर्ष लामो इतिहास बोकेको वीर अस्पतालले एमआरआइ सेवा सुरु गरेको छ । वीर अस्पतालले चर्चा चलेको वर्षाैंपछि ८ करोड ६१ लाख रुपैयाँको…
ट्वान्टी–२० विश्वकप क्रिकेटमा भारतको रोमाञ्चक जित
ट्वान्टी–२० विश्वकप क्रिकेटमा भारतको रोमाञ्चक जित काठमाडौं, ११ चैत । बंगलादेशलाई अन्तिम बलमा हराउँदै आयोजक भारतले विश्वकप ट्वेन्टी–ट्वेन्टी क्रिकेट प्रतियोगितामा दोस्रो जित दर्ता गरेको छ । बैंङ्लोरमा गएराति सम्पन्न खेलमा…
विश्व क्षयरोग दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईंदै
विश्व क्षयरोग दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईंदै काठमाडौं, ११ चैत । विश्व क्षयरोग दिवस आज विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाईंदै छ । ‘टीबी रोक्न एकजुट हौं’ भन्ने नारासहित यो दिवस…